Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Hoteelada Jamaica iyo warshadaha maqaayadaha waxay koraan 330.7%
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • kariska • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Hoteelada iyo maqaayadaha Jamaica oo aad u batay
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, ayaa soo dhoweeyey tirooyin uu shaaciyey Machadka Qorshaynta Jamaica (PIOJ) shalay, kuwaas oo tilmaamaya koboc weyn oo ka jira warshadaha Huteelada iyo Makhaayadaha. PIOJ waxay ku dhawaaqday in dhaqaaluhu uu kordhay 12.9% intii lagu jiray Abriil ilaa rubucii Juun ee 2021 marka la barbar dhigo isla muddadii sanadkii hore. Warshadaha dalxiiska iyo soo -dhoweynta ayaa si weyn uga qayb qaatay tan, iyada oo heerarka koboca rikoorka ee maal -galinta hoteellada iyo imaatinka booqdaha caalamiga ah.
Warshadaha Huteelada iyo Makhaayadaha ayaa diiwaangeliyay heerka ugu sarreeya ee koritaanka qaybta warshadaha adeegyada iyada oo korodhay 330.7%.
Warshadaha adeegyadu waxay kordheen 14% intii u dhaxaysay Abriil ilaa Juun rubuc sababtoo ah koror aad u weyn ayaa yimid soo -booqdaha.
Abriil-Maajo 2021, imaatinka joogsiga ayaa ahaa 205,224 booqde.
Marka loo eego xogta ay sii daysay PIOJ, warshadaha Huteelada iyo Makhaayadaha, waxay diiwaangeliyeen heerka ugu sarreeya ee koritaanka qaybta warshadaha adeegyada, iyadoo korortay 330.7%. Guud ahaan, warshadaha adeegyadu waxay kordheen 14% intii u dhaxaysay Abriil ilaa Juun sababtoo ah kororka weyn ee soo -booqdayaasha marka la barbar dhigo isla muddadii sannadkii hore, markii xudduuddu xirnaayeen.
Tirooyinku waxay muujinayaan in bilaha Abriil-Maajo 2021 ee imaanshiyaha joogitaanku uu ahaa 205,224 booqde oo aan la mid ahayn isla muddadii 2020.
Wasiir Bartlett, oo ku farxay warbixinta, ayaa sheegay in “warshadaha martigelinta ay ka mid ahaayeen kuwa ugu daran ee ku dhacay bilowgii masiibada. Dhab ahaantii, waxay joogsatay gabi ahaanba taas oo si weyn u saamaysay dhaqaalaheena. Sidaa darteed waxaan aad ugu faraxsanahay horumarka aan gaarnay si aan dib ugu soo laabanno, iyo saamaynta togan ee aan ku yeelannay dhaqaalaheena, iyo fidinta dadka Jamaica. ”
“Kordhinta 330.7% ee waaxda hoteelku ma aha hawl yar waana natiijada ka dhalatay shaqada adag ee Wasaaradda Dalxiiska iyo daneeyayaasheenna ay u galeen sidii loogu abuuri lahaa jawi nabdoon shaqaalahayaga ku jira warshadaha iyo sidoo kale martidayada. Xumbada aan ka abuurnay gudaha Waddooyinka Adkeysiga Dalxiiska, oo ku heshay aqoonsi caalami ah wax -ku -oolnimadeeda iyo hal -abuurnimadeeda sidoo kale waa in la qiimeeyaa. Waaxda dalxiiska ee Jamaica wuxuu u sii kobcayaa sidii warshad aan faa'ido badan lahayn laakiin sidoo kale ammaan ah, aan xuduud lahayn oo ammaan ah, ”ayuu raaciyay.
Wasiirka ayaa sidoo kale mashaariic sii wata kobaca rubuca soo socda, sida kii ugu dambeeyay dib-u-furitaanka warshadaha dalxiiska ayaa la saadaalinayaa inay saamayn weyn ku yeelan doonto dhaqaalaha.
“Waxaan sameyneynaa guulo aad u wanaagsan oo aasaaska u dhigaya dib -u -soo -kabashada buuxda ee waaxda dalxiiska Jamaica, si ammaan ah oo xilkasnimo leh. Ma noqon doonto waddo sahlan maadaama aan ku soconno mustaqbal aan la saadaalin karin laakiin, mustaqbalka fog, waxaan u yeelan doonnaa waaxda dalxiiska mid nabdoon, loo dhan yahay oo adkaysi u leh shaqaalahayaga, booqdayaasha iyo la -hawlgalayaasha safarka, ”ayuu yiri Bartlett.
Machadka Qorshaynta ee Jamaica (PIOJ) waa hay'ad ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda iyo Adeegga Dadweynaha (MOFPS). Waa wakaaladda qorshaynta ugu horreysa ee dawladda oo doonaysa inay bilowdo oo isku dubarido horumarinta siyaasadaha, qorshayaasha iyo barnaamijyada loogu talagalay horumarinta waarta ee Jamaica. Waxaa loo aasaasay si gaar ah si loo xoojiyo awoodda qorsheynta ee Dowladda.